भूकम्पको घर बनाउने आशैआशमा मन्थली ओर्लिए पीडितहरु, यिनका पीडा न सरकार सुन्छ न भगवान नै
जनता भ्वाइस calendar_today १५ साउन २०७७, 1:27 pm
साउन १५ । जनता भ्वाइस संवाददाता, रामेछाप
नेपालमा पछिल्लो पटक भूकम्प गएको पनि आज ५ वर्ष कटिसकेको छ । २०७२ साल बैशाख १२, १३ र २९ गते गएको भूकम्पले रामेछापमा धेरै घरहरु भत्किएका थिए भने सोही अनुपातमा घरहरुमा क्षति पुगेको थियो । पहिलो पटक सोही वर्षका माघ महिनादेखि भूकम्प निर्माण प्राधिकरणको जन्म पछि प्राविधिक (इन्जिनियर) हरुबाट स्थलगत रुपमा क्षतिको लगत संकलन कार्य थालिएको हो ।
तर रामेछाप जिल्लामा करिब १ हजार ४ सय पीडितहरुको न अहिलेसम्म घर बनेको छ, न त उनीहरुले सरकारी तवरबाट आवास पुर्ननिर्माणको लागि पाउनु पर्ने ३ लाख नै पाएका छन् । पटक पटक गरिएको स्थलगत सर्भेक्षणको क्रममा समेत आफूहरु लाभग्राहीको सूचीमा पर्न नसकेको कारणले जिल्लाका धेरै पीडितहरु राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण रामेछाप शाखा मार्फत नेपाल सरकारलाई मुद्धा दायर गर्न मन्थली आइपुगेका छन् ।
मन्थलीको तातो गर्मी, खानु न पिउनु करिब १० दिन देखि यो भिड यस्तै छ राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण (भवन) को यो कार्यालयमा । आफूहरु अझै लाभग्राहीको सूचीमा समावेश हुने आशाले यी पीडितहरु यहाँ उपस्थित भएका हुन् । जिल्लाका सबै पालिकाहरु र भौगोलिक रुपबाट हेर्ने हो भने गुम्देलदेखि गोश्वारा सम्मका नागरिकहरु असिन पसिन भएर यहाँ लाम लाग्न आइपुगेका हुन् ।
यी लाम लाग्ने भूकम्प पीडितहरुको कुरा अब भूकम्प निर्माण प्राधिकरणको न्यायिक समितिले सुन्ने छ । आफ्नो गुनासो र उजुरी दर्ता गराउनका लागि टाढाटाढादेखि यी पीडितहरु लामबद्ध भएका हुन् ।
मुलुृक कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारणले संकटमा छ । यी पीडितहरुलाई यो नदेखिने समस्याको कुनै चिन्तै छैन, चिन्ता छ त मात्रै आफ्नो घर नहुनुको । आज साउन १५ गते नेपाली समाज खिर खाएर रमाइरहेका बेला यी पीडितहरु आफूले आवास पुर्ननिर्माणको लागि राहत पाएको भन्दै राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण मार्फत नेपाल सरकारलाई मुद्धा हाल्न यहाँ जम्मा भएका छन् । यो भिडले के खायो या खाएन, यो भिडलाई तिर्खा लाग्यो या लागेन, यो भिडलाई मन्थलीको करिब ४० डिग्रीको तापक्रममा कति गर्मी भएको होला ? त्यो न यस कार्यालयले सोध्न सक्छ, न त स्थानीय प्रशासनले नै । धेरै सास्ती खेपेको यी पीडितहरु मध्ये उमाकुण्ड गाउँपालिका बाम्तीका प्रभात बस्नेत भन्छन्, ‘विगतमा ४ पटकसम्म गुनासोको लागि आवेदन दिइसकेको छु । अहिले पनि उजुरी गर्न यहाँ आइपुगेको छु । हेरौं अब रकम पाइन्छ कि ? अरुले पनि पाएका छैनन् र मैले पनि लाभग्राही बन्न पाउँछु भनेर खासै ठूलो आश गरेको छैन ।’
बस्नेत जस्तै लिखु तामाकोसी गाउँपालिका वडा नं. ६ खिम्तीका कृष्ण कडरिया समेत यस्तै पीडाले पीडित भएका छन् । कार्यालयको लाचारीपन र व्यवस्थापनमा गरिएको कमजोरीले यो तातो घाममा आफूहरु लाइनमा बस्न बाध्य भएको कडरिया बताउँछन् ।
दोरम्बाकी संगीता थापा पनि लाभग्राही बन्ने सपना बोकेर सपनाको घर कल्पना गर्दै मन्थली झरेकी छिन् । उनलाई अझै पनि आफू लाभग्राहीको सूचीमा पर्छु भन्ने नलागेको बताउँछिन् ।
मन्थली नगरपालिका वडा नं. १४ काविन्द्रबहादुर खड्का अझै आफू कटेजमा नै बस्न बाध्य भएको र लाभग्राही बनी घर बनाउने आशाले मन्थली झरेको बताउँछन् । इन्जिनीयरहरुले आफूलाई लाभग्राहीको सूचीमा नपारिदिएको हो कि भन्ने उनको शंका रहेको छ ।
यता पुनर्निमार्ण प्राधिकरण भवन रामेछाप शाखाका प्रमुख गणेश अर्याल हिजो २०७३ सालमा नै सही डाटा लिन नसकेको र प्राधिकरणले गरेका केही गल्तीहरुको कारण आज यो समस्या आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पटक पटकको गुनासोमा लाभग्राही बन्न नसकेका भूकम्प पीडितहरु अब कानुनी बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ । कानुनी बाटोबाट गएर मुद्धा जित्नुभो उहाँहरुले यदि भने मात्र उहाँहरु लाभग्राही हुन पाउनु हुनेछ । आज यस्तो समस्या आउनुमा नीतिगत, प्राविधिक, व्यवहारिक र निर्णयगत समस्याहरु रहेका छन् ।